लकडाउनको असर देखिँदै, मेलबर्नमा जम्मा ३७ नयाँ कोरोना संक्रमण ! « MNTVONLINE.COM
लकडाउनको असर देखिँदै, मेलबर्नमा जम्मा ३७ नयाँ कोरोना संक्रमण !
अष्ट्रेलियाको भिक्टोरिया राज्यमा गएको जुनयताकै सबैभन्दा कम नयाँ कोरोना संक्रमण देखिएको छ । गएको २४ घण्टामा मात्र ३७ जना नयाँ कोरोना संक्रमित भेटिएपछि कलडाउनको प्रभाव देखिएको विश्लेषण हुँदैछ । अझ दुई साताका लागि थप गरिएको लकडाउन अवधि आगामी सेप्टेम्बर २८ तारिखमा सकिनेछ । त्यसअघि शून्य संक्रमणदर अथवा कम्तिमा १० भन्दा कम बनाउने लक्ष्य भिक्टोरियाको देखिन्छ ।
एकातिर कोरोना संक्रमणको दर घटिरहेको छ भने अर्कोतर्फ, कोरोनाका कारण लगाइएको लकडाउन र अनिवार्य मास्क लगाउने नियमलाई हटाउनुपर्ने माग गर्दै मेलबर्नका विभिन्न स्थानमा सप्ताहन्तहरुमा फ्रिडम डे मनाउने क्रम पनि जारी छ । अघिल्लो साता २ सय भन्दा बढीले प्रदर्शन गरेकोमा यो साता पनि यस्तै कार्यक्रम राखिएका छन् । १६ सय ५२ डलर जरिवाना गर्ने प्रावधानबाट पनि प्रदर्शनकारी डराएको देखिएको छैन ।
शनिबार र आईतबार मेलबर्नका विभिन्न ठाउँमा सरप्राईज प्रदर्शन गर्ने उनीहरुले आफ्नो सामाजिक सञ्जालहरुबाट बताइरहेका छन् । प्रदर्शनकारीहरु मेलबर्नको सिटीस्थित बोटानिकल गार्डेनमा भेला हुने अनुमान छ ।